Gaa na Ugwu Olympus | Akụkọ Njem
Gaa na Ugwu Olympus
Mariela Carril | | Greece, Nduzi
Otu n'ime ugwu ndị a kacha mara amara n'ụwa bụ Ugwu Olympus, ugwu kachasị ewu ewu na Gris na nke kachasị elu. Ebighebi jikọtara ya na Akụkọ ifo ndị Greek Taa ọ bụ ebe ọtụtụ puku ndị ọbịa na-abịa ịmasị ụdị na ọdịdị ya.
N'ebe a, ị nwere ike ime ntakịrị ihe niile, jee ije, gbagoo elu ya, hie ụra n'ụlọ ya ma nwee otu n'ime oge dị egwu nke ndụ gị. Ka anyị lee Ugwu Olympus taa.
1 Ugwu Olympus
2 Gaa na Ugwu Olympus
Ebere ya site na nkume sedimentary ihe dịka nde 200 gara aga N'ime ihe dị n'oké osimiri Otu nde afọ mgbe nke ahụ gasịrị, glaciers ndị ahụ kpuchiri ya ma gbanwee ọdịdị ala ahụ, na mgbe e mesịrị, mgbe ice gbazere, iyi ndị ahụ kpụpụrụ nkume na ụwa, na-enye ọdịdị ọhụrụ na mpaghara gbara ya gburugburu. A na-ahụ ihe omume ndị a nke ala taa taa na morphology nke ugwu na elu ya na ala miri emi nke miri emi.
Na mpaghara ala nke ugwu ahụ ihu igwe bụ Mediterenian, na-ekpo ọkụ ma na-akpọ nkụ n'oge ọkọchị ma na iru mmiri na oyi na udu mmiri. N’ebe dị elu karị, snow na mmiri ozuzo na-apụta n’oge ọkọchị. N'ezie, ọnụ ọnụ, ebe kachasị elu bụ na banyere 2 puku mita o nwere snow itoolu nke ọnwa iri na abụọ nke afọ, bụ Septemba rue Mee. Ọnọdụ mmiri igwe ndị a na-eme ka ahịhịa na anụmanụ nke ugwu dịgasị iche. 25% nke osisi okike Greek na-anọchi anya ebe a ma nwee ọtụtụ ụdị dị iche iche.
N'aka nke ọzọ, enwere njikọ oge ochie nke ugwu na akụkọ ifo ndị Greek, ebe ọ bụ ụlọ nke Chi iri na abụọ nke OlympiaYabụ ịgbakwunye data a niile ma ị nwere nnukwu ugwu dị ebe ahụ, na-eche ọtụtụ ndị ọbịa kwa afọ.
Ugwu Olympus dị n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Gris ma rute mita 2917 Dị ka anyị kwuru ọ bụ ugwu kachasị elu na Gris na nke abụọ kasị elu na Balkans. Ndagwurugwu ya di warawara ma nwekwa oke ohia nke nwere ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ pịrị apị nke mmiri na ọgba na ya. Ọnụ ha, enwere 52 ọnụ ọgụgụHa na-enwe snow ọtụtụ ọnwa n’afọ ma ọ bụ n’igwe ojii na-ezochi ya kpamkpam.
Ọnụ ọgụgụ kachasị sie ike ịrịgo na Mytikas, e ruru nzuko ahụ na 1913 maka oge mbụ. Kemgbe ahụ, ndị njem anaghị akwụsị ịbịa, ma o doro anya na njem ahụ siri ike. Kemgbe afọ ndị 30, a na-atụle mpaghara ahụ dum National Park, maka nnukwu ihe dị iche iche dị na mbara igwe, ebe 1981 UNESCO enyela aha ya Ebe nchekwa biosphere.
Ugwu Olympus dị n’agbata mpaghara Masedonia na Thessaly na ụzọ kachasị mma iji nweta ya na ọtụtụ ụzọ ya si n'obodo ndị njem nleta bụ Litochoro, na ụkwụ nke ugwu ahụ n'onwe ya. Ọ bụrụ n’inwere ụgbọ ala ma ọ bụ nọrọ na Tesalonaịka, njem ahụ ga-ewe naanị awa atọ site n'okporo ụzọ na-akwụ ụgwọ ma ọ dị isii site na Atens (enwere kilomita 263 n'etiti isi obodo na ugwu). Ọ bụrụ n ’ịnweghị ike iji ụgbọ oloko si Atens gaa Larissa (awa ise), sikwa ebe ahụ jiri tagzi na-aga Litochoro naanị ọkara otu awa.
N'ihe banyere ụgbọ oloko ahụ site na Thessaloniki, ọ bụ ọrụ na-aga were were otu elekere na nkeji iri ma obere tagzi na-esochi ya. Ọ bụrụ na ụgbọ ala na-amasị gị, ịnwere ike ịnwe otu site na ọdụ na Thessaloniki, awa abụọ na nkeji iri na awa asaa si Atens.
Anyị na-ekwu maka ugwu, anyị na-ekwu maka ya na-arị ugwu ma ọ bụ na hiking. Kedu ka ọrụ ndị a si dị na Ugwu Olympus? Ọfọn, dị mfe, ọ bụ ezie na ọ bụghị na-enweghị nsogbu. E nwere ọtụtụ ụzọ dị mfe soro na ha ga-eduru gị gaa ebe kachasị mma, site na panoramic. I nwekwara ike ịkwọ akụkụ, ọbụlagodi na mmalite nke ọtụtụ ụzọ. Igba ugwu zuru oke na ugwu Olympus na-ewe ihe dika ubochi ato na abali.
na ụzọ doro anya Ha nwere nsogbu dị iche iche, site na III ruo VIII, dịka ụkpụrụ ụwa si dị. Ọ kachasị mma ịjụ ajụjụ na EOS (Greek Mountaineering Club), dabere na Litochoro, ebe ị nwere ike ịnweta maapụ na ndụmọdụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka pụrụ iche nke mmadụ n'ụzọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ ma kpọọ onye nduzi site na Pieria, obodo ọzọ dị nso.
Dị ka anyị kwuru n'elu mmalite kachasị mma nke njem na Ugwu Olympus bụ Litochoro. Enwere ọtụtụ ụlọ nkwari akụ na ozi iji malite njem ahụ. I nwekwara ike inweta ozi gbasara ebe a mara ụlọikwuu. Mgbapu ọhịa ma ọ bụ na-akwụghị ụgwọ bụ ihe megidere iwu ebe a na Gris ka ị mee ya na ebe pụrụ iche na mgbago ugwu ahụ, amachibidoro ezumike nke ogige ahụ.
A bia na hiking enwere ndi ufodu ụzọ ụkwụ dị iche iche dịka nke dị mfe. Otu n’ime ha bụ nke ahụ sonye Litochoro na Golna, Castana na Litochoro ọzọ. Litochoro bụ obodo nke puku mmadụ asaa bi na ya ebe njem na ịgagharị ọtụtụ ugwu na-apụ, saịtị nke ọmarịcha ụkpụrụ ụlọ ọdịnala. Zọ ahụ ga - eme ka ị hụ Chọọchị nke Agios Yoannis na nke onye amụma Elijah na 2800 mita dị elu. Ọ bụ elu kachasị elu nke ụzọ a.
Mgbe ahụ, site na nke a, ị na-eje ije otu awa gaa Golna site na ebe ị nwere ike ịhụ ọmarịcha elu nke ọmarịcha nke Enipeas. Ga ugwu ugwu ọdịda anyanwụ, ị gbadara n'ụzọ E4 nke jikọtara Litochoro na Prionia wee si otú a laghachi, na-eje ije na njedebe ruo ihe dị ka elekere anọ n'etiti echiche mara mma.
Easyzọ ọzọ dị mfe bụ nke na-ahapụ Prionia, gafere Aghio Spilleo wee rute ebe obibi ndị mọnk nke San Dionisio. Thenhapụ mgbe ahụ site na Prionia ị ga-aga n'okporo ụzọ E4 gaa Litochoro ma soro map ị ga-agafe na nsụda mmiri, ị ga-agafe ugwu ugwu Enipeas site na akwa mmiri wee rute Aghio Spilleo na ebe obibi ndị mọnk nke ndị senti. Ọ bụ njem were awa abụọ.
Pathzọ nke atọ dị mfe bụ nke sonyere Krevatia Vrontous, Papa Aloni na Aghia Triada. Pathzọ a na-arị elu na-arịda mana ọ bụla adịghị agafe mita 950. Ọ na-amalite na ebe mgbaba Krevatia, na-aga n'ihu n'okporo ụzọ ochie nke gbadara Aghia Triada, n'etiti oke ọhịa, ị gafere osimiri ahụ ma mgbe ị gachara nkeji iri anọ ị rutere Papa Aloni. Mgbe ee, ị nwere ụzọ ndị ọzọ a na-ekewa dị ka nsogbu siri ike ma sie ike - dị egwu. A gha aghaghi ime nke ikpeazu ma oburu na mmadu bu onye okachamara ma obu soro onye nduzi mara otutu ebe.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na njem anụ ahụ abụghị ihe gị, ị nwere ike mgbe niile gazuo obodo site n'ugwu dika litochoro otu ihe, Dion nke bụ obodo ndị Masedonia oge ochie, Anus Skotina, obodo mara mma, Palaios Panteleimonas Narị afọ nke XNUMX ma ọ bụ - Palaioi Poroi, obodo okwute nke e wuru n’agbata narị afọ nke iri na asaa na nke iri na asatọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Greece » Gaa na Ugwu Olympus
Beech ọhịa nke Otzarreta